बिज्ञान/प्रविधि – Page3– JanaSanchar.com
नेपालमा प्लास्टिकबाट डिजेल निकाल्ने प्रविधिको परीक्षण गरिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) द्वारा चितवनको भरतपुरमा प्लास्टिकबाट डिजेल निकालिएको हो । नाष्टले एक कार्यक्रमको अयोजना गर्दै प्लास्टिकलार्इ पेलेर डिजेल निकालिएको हो । नेपालले भारतबाट वार्षिक अर्बाैं डिजेल अायात गर्दै अएको छ ।चितवनमा आयोजित..
संसारभरमा साइबर हमलाका बढ्दो घटना र खतराकाबीच चीनले ह्याक गर्न नमिल्ने ‘अनह्याकेबल’ इन्टरनेट नेटवर्क लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । यो इन्टरनेट नेटवर्क ह्याक गर्न सजिलो हुने छैन भने कसैले ह्याकिङ गर्न खोजेको समेत तत्काल पत्ता लाग्नेछ । यो नयाँ प्रविधिलाई ‘क्वान्टम क्रिप्टोग्राफी’ भनिन्छ र पारम्परिक क्रिप्टोग्राफीभन्दा बिल्कुल फरक..
एन्ड्रोइड डिभाइस मेनेजर (एडिएम) को प्रयोग गरेर मोबाइलको अन्तिम पटक प्रयोग कहाँ भएको हो त्यहाँको लोकेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि निम्न कार्य गनुपर्ने हुन्छ । १. पहिला एन्ड्रोइड डिभाइस मेनेजर को वेबसाइट www.google.com/android/devicemanager मा साइन–इन गर्नुहोस र तपाइको मोबाइल नै सेलेक्ट भएको छ भनेर पक्का गर्नुहोस । २. अब यहाँ बाट तपाइको मोबाइलको लग्भग..
ऋशभ न्यौपाने, काठमाडौँ । पिनकोड, पासवर्ड, प्याटन लक गर्ने चलन यसघि नै चलेको थियो । कुनै समय मोबाइलका गोप्य दस्तावेज र आफ्ना डाटालाई सुरक्षित गर्न पिनकोड, पासवर्ड र प्याटन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । तर अब भने त्यो बाध्यताको अन्तय भएको छ । अति नै सुरक्षित मानिएको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको प्रयोग गरि मोबाइल लक गर्ने युगको..
जिमेल एकाउन्ट चोरी हुनबाट बच्ने उपाय
नेपालमा धेरै व्यक्तिको जिमेल एकाउन्ट चोरिएको खबर बेला–बेलामा फेसबुक वा ट्वीटरमा लेखिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आफूसँगै बसेको व्यक्तिको ईमेलबाट ‘म क्यानडामा पुगेको थिएँ, अहिले समस्यामा परेको छु । कृपया पैसा पठाएर सहयोग गर्नुहोला’ भन्ने ईमेल आउँछ । थाहा पाउनेले सो ईमेल चोरी भएको बुझिहाल्छ । तर, कतिपय अवस्थामा लामो समय भेट नभएको साथीलाई..
यसकारण तपाईंको कम्प्युटरमा जिमेल र यूट्युब ढिलो खुल्छ ?
विगत केही हप्ता देखि नेपालमा गुगलको यूट्युब, जिमेल लगायतका एप्लिकेसन्स हरु ढिलो खुल्ने गरेको बारेमा धेरैको संख्यामा प्रयोगकर्ताहरुबाट गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसरी गुगलका एप्लिकेसनहरु ढिला इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानले घटना प्रति गम्भीर ध्यानकार्षण भएको बताउँदै स्पष्टिकरण दिएको छ । संघका अनुसार गुगलले विगत ४ बर्ष देखि..
दश वर्षदेखि खोजिरहेको रोवोट शसस्त्र प्रहरीले बल्ल भेट्टायो
१४ भदौ, काठमाण्डौं । जिविएस टिमले तयार पारेको सर्भालेन्स रोवोट शसस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्त्रण गरिएको छ । शसस्त्र प्रहरी प्रहरी बलको मुख्यालयमा शसस्त्र प्रहरी प्रमुख सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई रोवोट हस्तान्त्रण गरिएको हो । ‘शसस्त्रलाई सर्वाईलेन्स रोवोटको आवश्यकता भएको हाम्रो टिमले महशुस गरि लामो खोज तथा अनुसन्धानपछि यो रोवोट तयार गरेका..
अरुण र बरुण ग्रहमा हिराको अविरल वर्षा
सौर्य परिवारको एक ग्रह पृथ्वीमा पानीको वर्षातले कहिलेकाहिँ बबण्डर मच्चाउँछ । तर यही मण्डलका दुई ग्रहहरु, अरुण र बरुणमा चाहिँ हिराको वर्षा हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, पछिल्ला केही दिनयता अरुण र बरुण ग्रहमा हिराको अविरल वर्षा भैरहेको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, यी दुई ग्रहको भित्रि भागमा वायुमण्डलीय चाप अत्यधिक हुन्छ । जसका कारण..
भोयजर मिसनको ४० वर्ष अनन्त अन्तरिक्ष यात्रामा रहेका दुई यानहरुको कथा
आकाश महर्जन ४० वर्षअघि भोयजर १ र २ मिसनहरुले आफ्नो अन्तरिक्ष यात्रा थालेका थिए । आज ४० वर्षपछि यी दुई अन्तरिक्ष यानहरु अन्तरनक्षेत्रीय यात्रा गर्दैछन्, पृथ्वीबाट इतिहासमै सबैभन्दा टाढा पुग्ने मानवनिर्मित वस्तुका रुपमा । ‘सबैभन्दा टाढा पुग्ने’ मात्र यी दुई यानहरुको लक्ष्य पक्कै थिएन; यिनले बृहस्पति र शनि ग्रहहरुलाई परिक्रमा गरी..